Maxay yihiin faa'iidooyinka Amazon keyword darajo keyword?
Inta badan ganacsatada internetka ayaa lumiya iibkooda iyo hoggaankaba sababtoo ah tartame sare. Maaha wax sahlan in la saadaaliyo xaaladda noocaas ah ugu yaraan inaadan si joogto ah ula soconin mawaadiicdaada muhiimka ah. Dabcan si aad u sameyso cilmi-baarisyada noocaas ah waxay noqon kartaa mid dhib badan oo waqti qaadasho ah. Nasiib wanaag, waxaa jira aalado kala duwan oo loo yaqaan 'Amazon keyword tracker' oo laga heli karo webka.
In this article waxaan ka wada hadli doonaa sida looga hortago qaar ka mid ah dhibaatooyinka aasaasiga ah ganacsatada Amazon sida caadiga ah la kulmaan dhaqankooda iyo la wadaagaan qaar ka mid ah khibradaha iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah si loo kordhiyo iibka alaabtaada.
Aan horay usocodno sida Amazon A9 algorithm u shaqeyso. Fahminta habka algorithms waxay naga caawineysaa inaan dhisno ololeyaal ku salaysan guulo Amazon iyo kor u qaadida alaabooyinka.
Sidee shaqo u raadinaysaa Amazon?
Amazon A3 algorithm waa wax la mid ah darajooyinka sare ee Google ee algorithms. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jira kala duwanaansho. Inkastoo Google uu diiradda saarayo bogagga shabakadda, Amazon wuxuu ka dhigayaa wax la mid ah alaabta. Marka la eego xogta tirakoobka, marka ay timaado cilmi baarista, isticmaalayaasha waxay tixraacaan raadinta Amazon halkii laga raadin lahaa Google. Waxaa lagu sharxi karaa liiska alaabada la heli karo iyo macluumaadka buuxa ee ku saabsan alaabooyinka. Waxaa intaa dheer, halkan waad is barbar dhigi kartaa qiimayaasha oo eegtaa dib u eegis ku saabsan alaab aad doorato. Isticmaalayaasha uma baahna inay raadiyaan inta badan sida raadinta Google. Dhammaan macluumaadka ku saabsan badeecada waxaa lagu meeleeyaa hal bog. Natiijooyinka raadinta ee Amazon ayaa aad u culus oo ay sababtay macaamiisha suurtagalnimada inay soo iibsato alaabta la soo bandhigay.
Amazon waxay tixgelineysaa tirada sifooyinka si loo go'aamiyo darajada wax soo saarka:
Caannimada alaabada ka dhex jirta macaamiisha;
Maxay yihiin nooca ugu sareeya ee celceliska celinta;
Maxay yihiin waxyaabaha ugu qiimaha badan ee lagu iibsado;
Waa sidee waxyaabo muhiim u ah baaritaanka raadinta.
Sidee loo cabbiraa heerka darajadaada Amazon adiga oo isticmaalaya raadiyaha darajada keyword Amazon?
Amazon darajo algorithm waa ugu horreyn ku saleysan ereyada muhiimka ah. Sidaa daraadeed, adoo isticmaalaya ereyada muhiimka ah ee laguugu talagalay si haboon ayaa kaa caawin doonta inaad ku fekerto inaad sare u qaaddo oo aad dhaliso gaadiidka taraafigga ah.
Iyadoo caawimo Amazon Keyword Key waxaad leedahay suurtogalnimada inaad doorato ereyada la isku beegay ee saxda ah iyo la socoshada jagadooda. Xogta la helay waxay kaa caawin doontaa inaad hubiso inaad dooratay ereyada saxda ah ee raadinta oo aad u isticmaashid meelaha saxda ah iyo istaraatijiyadeed. Waxaa intaa dheer, rikoodhka keyword keyword Amazon ayaa kaa caawin doona inaad ka soo baxdo tartamayaashaada iyo inaad soo jiidato macaamiisha aad u badan ee calaamaddaada.
Waxaa jira laba siyaabood oo suurtagal ah in lagu baaro loona eego ereyada muhiimka ah - buug gacmeed iyo automatic. Inkastoo ay suurtagal tahay in si isdaba-mar ah loo maro shuruudaha raadinta oo waqti badan ku qaato si loo hubiyo in ay tahay mid khuseysa ama maahan, way sahlan tahay in la isticmaalo raadiyaha muhiimka ah ee keydka Amazon. Iyada oo qalabkan xirfad-shaqsiyeedka ah waxaad badbaadin doontaa wakhtigaaga iyo helitaanka xogta ugu habboon ee saxda ah.
Sidee loola socdaa rakaabkaaga ereyada muhiimka ah adigoo isticmaalaya keyword keyword keyword Amazon?
Isticmaalidda qalabkaan si sahlan ayaad u ogaan kartaa midkaad ereyada muhiimka ah ee aad ujecel tahay si aad u fiican iyo meesha ay weli ka dambeyso tartamayaashaada. Qalabkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad go'aamiso shuruudaha raadinta ee tartamayaashaada ay isticmaalayaan si ay ugu kala saraan Amazon SERP iyo sida ay ufilan yihiin erayadan. Haddii aad leedahay hab caqli ah oo ku saabsan ololaynta ugu fiican ee Amazon, waxaad ka qaadan kartaa ereyadan oo aad u isticmaasho lacagtaada. Natiijo ahaan, waxay ku siin doontaa riixin istaraatiijiga suuq-galkaaga Source .